Nezvedu - Hebei Zuva Rekushanya Boka
Yakatangwa muna 1969 naSunrise kanzuru yemumugwagwa, Hebei Sunrise indasitiriboka iboka remaindasitiri bhizinesi rine nhoroondo refu. Kwemakore mazhinji kusimudzira, boka reSunrise rinosanganisira mabhizinesi gumi nematanhatu ane chiyero chakati kuti uye tekinoroji izvozvi.
Kubuda kwezuva boka kunonyanya kutarisa pazvinhu chete chimwe: zvigadzirwa zvesimbi zvigadzirwa zvesimbi, zvinosanganisira kupisa zvakapetwa, kutonhora kutenderera uye kutonhora-kuchira simbi (denderedzwa, kutenderera, rectangular, oval, nezvimwewo) pombi uye tube, inopisa rolling chikamu chechikamu (screw-yakaiswa simbi , uye zvimwe zvekuvakisa zvinhu), mwenje simbi keel, inotonhora-yakakungurwa uye yakarukwa strip simbi uye galvanizing simbi cipi neipi. PPGI uye PPGL inogonawo kupihwa.
Tinowanikwa mu Shengfang Town, Bazhou City, Hebei Province, inongova nzvimbo yepakati penzvimbo yeBeijing, Tianjin uye Baoding, 35km kumabvazuva kweTianjin New Port, uye 120km kuchamhembe kweBeijing , njanji nekutakura basa. Isu tinogadzisawo kambani mu tianjin uye hongkong.
Kambani yedu inofukidza nzvimbo ye66670 square metres. Kambani yedu yakarongedza kwenguva refu-refu zvigadzirwa (q215 q195 - q195L) inopa hukama neQian Steel, Hang Steel, Tian Steel, uye Tang Steel kuti ive yeyakagadzikana zvigadzirwa zvemhando. Isu takarongedzwa inotonhora-yakapetwa simbi strip, dema annealing simbi strip, galvanized simbi chubhu, simbi keel, isina mupendero simbi pombi uye HF-weld simbi pombi. Tinogona kuzvigadzira nenzira dzakasiyana zvichienderana nezvinodiwa nemutengi. Yedu yekugadzirwa kwemwedzi wega wega zviuru mazana matanhatu ematani.
Development pfungwa: gadzira yekutanga-chiyero chigadzirwa, kuhwina nemhando
Mukana pfungwa: nenguva mater ruzivo rwemusika
Talent pfungwa: iyo tsvimbo, iyo tsime rekupfuma
Nhungamiro yemhando yepamusoro: tevera iyo yakanaka kwazvo
Production pfungwa: kuchengetedzwa, kushanda zvakanyanya, mhando yepamusoro
Pfungwa yekutengesa: shandira pamwe nokutendeka
Pfungwa yebasa: shandira vatengi nemoyo wese
Kambani yedu inogona kuve nechokwadi chigadzirwa kugona uye zuva rekutakura. Tiri kutarisira kumisikidza kwenguva yakareba kubatana hukama nevatengi pasi rese.